Facts (tsy angano) momba ny Monster Loch Ness
Biby sy natiora Dinosaurs
Maro ny fanitarana, ny angano ary ny lainga mivantana momba ilay lazaina hoe Loch Ness Monster - izay maneso indrindra ny paleontologista, izay manambara tsy tapaka ny olona izay tokony hahalala bebe kokoa (sy ny mpikirakira ny zava-misy amin'ny TV-nao) izay i Nessie Dinôzôra iray efa ela na nendasina an-dranomasina.
Ny Monolithes Loch Ness no Cryptid malaza indrindra eran-tany
Azo antoka, ny Sasquatch, ny Chupacabra, ary ny Mokele-mbembe rehetra dia manana ny tanjon'izy ireo. Fa ny Monster Loch Ness dia lavitra lavitra ny "malaza" malaza indrindra, izany hoe, zavaboary iray izay efa voamariky ny "vavolombelona nahita" samihafa (ary izay noheverin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny) fa mbola tsy ekena amin'ny fananganana siansa. Ny zava-mahadomelina momba ny cryptides dia tsy azo atao ny manaporofo fa ratsy izany. Noho izany, na manao ahoana na manao ahoana ny fimamoana sy ny fanararaotan'ireo manam-pahaizana, dia tsy afaka milaza izy ireo fa 100% ny faharesen'ny Monster Loch Ness.
Ny fahitana voalohany nataon'i Nessie dia nandritra ny vanim-potoana matevina
Dragona medieval (Wikimedia Commons).
Niverina tany amin'ny taonjato faha-7 tamin'ny taonjato faha-7, nanoratra boky momba ny St. Columba i Mokala Scottish, izay voalaza fa niafina tamin'ny fandevenana lehilahy iray izay notafihana sy novonoin'ny "rano rano" tany akaikin'ny Loch Ness. Ny olana dia etsy sy eroa, na dia ireo mpino moanina tany am-piandohana aza dia nino ny devoly sy ny demony, ary tsy mahazatra ny fiainan'ny olomasina hiparitaka amin'ny fihaonambe hafa.
Ny tombotsoam-bahoaka tao amin'ny lozika Loch Ness dia nipoaka tamin'ny taona 1930
Hetsika avy amin'ny "King Kong" voalohany (Wikimedia Commons).
Andao isika handroso haingana-na miadana miandalana-13 taonan'ny taona, hatramin'ny taona 1933. Izany no nolazain'ny lehilahy iray antsoina hoe George Spicer fa efa nahita lava be sy lava be dia be, "endrika tena miavaka" izay niampita tsikelikely ny lalana teo anoloan'ny ny fiarany, hiverina any Loch Ness. Tsy fantatra raha i Spicer sy ny vadiny dia nihinana tamin'ny bitro o 'ilay zavaboary tamin'io andro io, fa ny kaontiny dia naverina iray volana taorian'izay, mpanao mozika antsoina hoe Arthur Grant, izay nilaza fa tsy nahavita namono ny bibi izy nandritra ny misasak'alina .
Ny sary nalaza malaza Nessie dia Hoax ivelany
Sary nalaina nalaza tamin'ny Loch Ness Monster (Wikimedia Commons).
Herintaona taorian'ilay fijoroana vavolombelona nanatri-maso ny Spicer sy Grant (jereo eo aloha), mpitsabo iray antsoina hoe Robert Kenneth Wilson no nalaza tamin'ny "sarin'i" Loch Ness Monster: sary manjavozavo lava, manaloka, mainty sy fotsy ary lohan-dalan'ny sarin'andriam-borona marevaka. Na dia io porofo io matetika aza no porofo tsy azo lavina amin'ny fisian'ny fisian'i Nessie, dia voaporofo fa diso tamin'ny taona 1975, ary indray indray tamin'ny 1993. Ny fanomezana dia ny haben'ny tontolon'ny farihy, izay tsy mifanandrify amin'ny lanjany Ny anatomie Nessie.
Tsy dia mahagaga loatra raha ny Sôkôpôda Loch Ness no misy
Olo-masom-borona mitaona (Vladimir Nikolov).
Rehefa navoaka ny sarimihetsika malaza Robert Kenneth Wilson (jereo ny sary teo aloha), dia tsy nitovy ny fitovian'ny loha sy ny tendron'i Nessie ho an'ny dinôzôra sauropod . Ny olana amin'ny famantarana an'io dia ny hoe saoropods dia ety an-tany, dinôzôro ny rivotra iainana; Raha nilomano i Nessie, dia tsy maintsy nandroaka ny lohany nivoaka ny rano indray mandeha isaky ny segondra vitsivitsy izy. (Ny anganongano Nessie-as-sauropod dia mety nanintona tamin'ny taonan'ny taonjato faha-19 fa nandany ny ankamaroan'ny fotoany tao anaty rano ny Brachiosaurus , izay hanampy ny lanjany lehibe.)
Azo antoka koa fa ilay Naftie dia maritoa an-dranomasina
Fisehoan-tarehin'i Elasmosaurus (Wikimedia Commons). Wikimedia Commons
Okay, noho izany ny Monster Loch Ness dia tsy dinosaoro; Mety ho karazana marika marenina fantatra amin'ny hoe plesiosaur ve izany? Tsy dia mety loatra izany. Ho an'ny iray, Loch Ness dia eo amin'ny 10.000 taona eo ho eo, ary ny plesiosaurs dia nanjavona 65 tapitrisa taona lasa izay. Raha zavatra hafa dia tsy nisy fitaovana ny gripa maripana , ka na dia plesiosaur aza i Nessie, dia mbola mila miparitaka imbetsaka mandritra ny ora maro izy. Ary tsy ampy sakafo ampy fotsiny ao Loch Ness ny manohana ny fangatahana metabolican'ny taranaka 10 taonina amin'ny elasmosaurus !
Ny Monochran'ny Loch Ness dia tsy misy
Loch Ness, minus Monster (Wikimedia Commons).
Azonao atao ny mijery ny toerana misy antsika. Ny porofo "voalohany" azontsika amin'ny fisian'ny Monster Loch Ness dia ahitana sora-tànana efa ela teo aloha, ny fijoroana vavolombelon'ireo mpanoratra fiarakodia Scottish (izay mety ho efa mamo be izany fotoana izany, na mandainga hanodina ny saina amin'ny fihetsika tsy misy dikany) , ary sary notsorina. Ny fitaterana hafa rehetra dia tsy azo antoka tanteraka, ary na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra amin'ny siansa maoderina, dia tsy nisy mihitsy ny voka-pandrefesana hita maso hita tamin'ny Monster Loch Ness.
Olona maro no manararaotra ny lozan'ny Loch Ness
Tendrombohitra Loch Ness (Advent in Edinburgh).
Nahoana no mbola mitoetra foana ny anganongano Nessie? Amin'izao fotoana izao, ny Monster Loch Ness dia mifamatotra mafy amin'ny indostrian'ny fizahantany any ivelany, fa tsy misy mahaliana azy indrindra ny mijery akaiky ny zava-misy. Ny hotely, toeram-pivarotana motela ary fahatsiarovana manandanja ao amin'ny manodidina an'i Loch Ness dia tsy hivoaka amin'ny raharaham-barotra, ary ireo mpankafy mendrika dia tokony hahita fomba hafa handany ny fotoanany sy ny volany, fa tsy ny mandeha manodidina ny faritry ny farihy miaraka amin'ny herin'aratra toeram-pisotro misy alikaola sy fananganana tohatra mampiahiahy.
TV Producers Tiavo ny Monster Loch Ness
Leonard Nimoy's "In Search Of ..." (Wikimedia Commons).
Azonao atao ny manantena fa raha ny anganonganon'i Nessie dia teo am-pototry ny fandroahana, ny mpamokatra TV any an-toerana, any an-toeran-kafa, dia hahita fomba hanesorana azy indray. Ny biby Planeta, ny National Geographic ary ny Discovery Channel dia mamoaka sombin-tsarimihetsika tsara avy amin'ny "ratings"? dokam-barotra momba ny cryptides tahaka ny Monster Loch Ness, na dia misy aza ireo tompon'andraikitra kokoa amin'ny zava-misy noho ny hafa (tsarovy Megalodon: Ny liona Monster Shake? ). Raha ny fitsipika ankapobeny dia tsy tokony hatoky ny fampisehoana TV izay manohina ny fiderana an'i Loch Ness Monster; Tadidio fa resaka vola, fa tsy siansa.
Mbola hanohy hino ny Monster Loch Ness ny olona
Ny Monster Loch Ness (Wikimedia Commons).
Nahoana, na dia eo aza ny zava-misy rehetra tsy azo lavina amin'ny antsipiriany etsy ambany, moa ve mbola maro ireo olona manerantany no mino ny Monster Loch Ness? Tsy azo atao ny manaporofo ny ratsy; Ho foana ny fisehoan-javatra mampalahelo indrindra, izay tena misy i Nessie, ary ho voaporofo fa diso ny fisalasalana. Saingy toa ny maha-olombelona ny maha-olombelona azy no inoana ny maha-olombelona mihoatra ny natiora, sokajy lehibe izay misy andriamanitra, anjely, demony, mpikatroka Okrainiana, ary, eny, namantsika namana Nessie.
Ny Dinosaur tsara indrindra
Ny fanimbana lehibe indrindra eto an-tany
Ny 10 Cutest Dinosaurs
10 Dinôzôra voantso taorian'ny fiterahana
Ireo Reptilia Voalohany
Megalodon - Manana Live Shark! (Tsy)
The Five Best (ary ny dimy ratsy indrindra) Movies Dinosaur
Afaka Nifandray Amin'ny Fiara Noa ve Ireo Dinosauro Rehetra?
Protoceratops vs. Velociraptor: Iza no nandresy?
Utahraptor vs. Iguanodon - Iza no nandresy?
Biby an-tapitrisany notsenain'ny biby fahiny
Ny niandohan'ny anarana Nunavut
Ny famoahana ny Push Pin
Ahoana no fomba hilalao ny Game Defender Golf
Anarana Sikh Baby tokana amin'ny heviny ara-panahy
Fampandrenesana an'i Vishnu Tompo, fiarahamonina tia fihavanana Hindoisma
Mijery ny isam-paritra amin'ny statistika
Mianara ny habeny sy ny halalin'ny dobo
Ireo Sultan an'ny Fanjakana Ottoman: c.1300 hatramin'ny 1924
John Alfred Prestwich (JAP)
Mieritreritra ny mamaky
University of the Pacific Admissions
Cryolophosaurus, ilay "Cold Crested Lizard"
Fotoam-piraofanana momba ny tantaran'ny Ku Klux Klan
Uruk - Metropolitan Mesopotamian any Irak
Fitsipika ara-pitsaboana amin'ny finoana silamo
Michelle Wie ao amin'ny Oniversiten'i Stanford
Stratigraphy: Ny Geologic Earth, ny Arkeolojia
Fandaharanasa fanabeazana manokana izay manohana ny fitondran-tena
Fomba ahoana no hanalavirana ny fandefasana ny filazana ny vaovaoo?
Ny fomba hiorina sy hanamboarana ny volonao maina
Long Coastes eto an-tany
Fomba hafa amin'ny fanaovana didy sy fangatahana
Lesona Japoney fampidirana (1)